Dagaal xoogan oo Al shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhexmaray dagmada Afmadoow – Somali Top News
Dagaal xoogan oo Al shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhexmaray dagmada Afmadoow
Gobolka Jubbada Hoose wararka laga helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay degmada Afmadow ee Gobolkaasi ay ku dagaalameen Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbland oo dhinac ah iyo Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerarku qaadeen saldhig Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin degmadaas Afmadow,waxaana goobjoogayayaal ay sheegeen in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca Ururka Al-Shabaab,hayeeshee weli aan la ogeyn khasaaraha labada dhinac kasoo gaaray dagaalkaas.
Dagaalka ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday hal askari oo Ciidamada Dowladda katirsanuu,balse dhinaca Al-Shabaab khasaaraha kasoo gaaray aan weli wax faah faahin ah lag bixin.
Wararkii u dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya degmada afmadow ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay wadaan dhaq dhaqaaqyo ciidan, iyaga oo isku fidiyey deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
← Soomaali Burcad badeed ah oo lagu maxkamadeynayo Jaziirada Seychelles
Khasaaro ka dhashay shil gaari oo ka dhacay duleedka Garoowe →
Madaxweynaha Puntland Oo Soo Saaray Wareegto Isku Shaandheyn Ah
Shuruucyo cusub oo lagu soo rogay Kalluumeysatada dalka
February 26, 2019 February 26, 2019 Somali Top News 0
Qodobada laga soo saaray shirka Wadatashiga Puntland- Akhriso
March 18, 2020 March 18, 2020 Somali Top News 0